How to Start A Successful Company | Martech Zone
လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်ရုံ | မတ်လ 1, 2021 စတင် | Virtual Event
တနင်္ဂနွေ, ဇွန် 28, 2009 Douglas Karr
စာဖတ်ချိန် -3မိနစ်
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်ုပ်သည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချို့နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်စိန်ခေါ်မှုအရှိဆုံး၊ စျေးကြီးပြီးအချိန်ကုန်ဆုံးသောစီမံကိန်းဖြစ်သည်။ ငါအရင်ကမိတ်ဖက်လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ထုတ်ကုန်တွေရောင်းခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ၀ န်ထမ်းတွေ၊ ဖောက်သည်တွေလိုနေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ဖို့အကြောင်းပြောနေတာ။ ဝါသနာမဟုတ်ဘူးစစ်မှန်တဲ့စီးပွားရေး။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်၏တစိတ်တပိုင်းသည်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုစတင်လုပ်ကိုင်သောလုပ်ငန်းရှင်များစက်ဝိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီအသိုင်းအ ၀ ိုင်းမှာသူငယ်ချင်းအများကြီးရဖို့ငါကံကောင်းတယ်။ ငါသူတို့ထဲကအများစုဟာနဲ့နှလုံးသားထဲကနှလုံးသားနဲ့စကားစမြည်ပြောခဲ့တာတွေအားလုံးကိုငါခုန်ဖို့ငါ့ကိုအားပေးတယ်။
ဘယ်လိုအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစလုပ်သလဲ။ ငွေရှာလား ထုတ်ကုန်တစ်ခုတည်ဆောက်မည်လား သင့်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရယူပါလား။ ရုံးခန်းတခုရလား။
လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းကိုမေးပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပေးအချို့ကကုန်ပစ္စည်းနေရာချထားရေးစာချွန်လွှာကိုရယူရန်နှင့်ငွေစုဆောင်းရန်အတွက်ပုံမှန်လည်ပတ်မှုစတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတွန်းအားပေးခဲ့သည်။ ဒါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစဖို့စျေးသိပ်မကြီးတဲ့ငုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကော်ပိုရေးရှင်းနှင့် PPM စတင်ခဲ့ပေမယ့်အောက်ခြေစျေးကွက်ထဲကကျဆင်းသွားခြင်းနှင့်ငွေစုဆောင်းခြင်းရပ်နေ၏။
အဲဒီအချိန်ကစပြီးကျွန်တော်တို့ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ပရောဂျက်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် PPM ဟာမှန်ကန်တဲ့ပထမခြေလှမ်းဟုတ်မဟုတ်မသေချာဘူး။ ကျနော်တို့တရားဝင်ဥပဒေကြမ်းများနှင့်တစ် ဦး ရှေ့ပြေးပုံစံအဘယ်သူမျှမနှင့်အတူပြေးမြေပြင်ကိုနှိပ်ပါ။ ငါအချိန်ပြန်ပြောင်းနိုင်လျှင်, ငါတို့အရင်းအမြစ်များကိုစုစည်းပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစတင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
ထုတ်ကုန်၏ဥပမာတစ်ခုဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုနှင့်ပတ်သတ်သောစီးပွားရေးတစ်ခုကိုရှင်းပြရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်ပိုင်ရှင်တစ် ဦး ထက်ပိုရှိလျှင်အမှန်တကယ်စီးပွားရေးပါ ၀ င်မှုရရှိခြင်းသည်ကောင်းသောအကြံဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်မလုပ်လျှင်၊ ပထမဆုံး client သည်ထိမှန်သည်အထိသင်လိုအပ်သည်ကိုမသေချာပါ။ PPM (ဤသည်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုပေးသောအထုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်) သင့်တွင်အမှန်တကယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမရှိမချင်းထိုအရာကိုမစိုးရိမ်ပါနှင့်။
စီးပွားရေးအစီအစဉ်? ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပေးအများစုကကျွန်ုပ်တို့အားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုပစ်မှတ်ထားသောအလွန်တိုတောင်းသောတင်ဆက်မှုတစ်ခုရရှိရန်အစားစီးပွားရေးအစီအစဉ်နှင့်အလုပ်ကိုလုပ်ရန်ပြောခဲ့သည်။ ROI ကိုနှစ်သက်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရှိလား။ အဆိုပါ ROI ပုံပြင်စာလုံးပေါင်း။ ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပစ်ချင်တဲ့သူရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလား။ သင်ကကမ္ဘာကြီးကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲဆိုတာပြောပါ။ လူအများစုကိုအလုပ်ခန့်ထားသလား။ သင့်ကုမ္ပဏီလုပ်မည့်အလုပ်အကိုင်တိုးတက်မှုအကြောင်းပြောဆိုပါ။
ငါသွားခဲ့တဲ့လမ်းကိုငါစိတ်မပျက်ဘူး၊ အဲဒါကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာမယုံဘူး။ အောင်မြင်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့်သူတို့၏ခါးပတ်အောက်ရှိလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်နောက်လာမည့်ကုမ္ပဏီကိုစတင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသောအချိန်ရှိသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်သင့်အားလုံးလုံးလျားလျားအကာအကွယ်ပေးကြသည်။ သင်ချမ်းသာကြွယ်ဝခဲ့သောနောက်ဆုံးလူများသည်သင်စတင်မည့်နောက်အခွင့်အရေးကိုမျှော်လင့်နေကြသည်။
အဖြေတိုတိုမှာကျွန်ုပ်သိသောရှေးရှေးတစ် ဦး စီသည်သူတို့ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းနှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းကိုလျှောက်လှမ်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ အချို့ကထုတ်ကုန်များကိုတည်ဆောက်ပြီးဖောက်သည်များရောက်လာသည်။ အချို့ကဘဏ်များမှငွေချေးယူသည်။ တချို့ကသူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုမှချေးယူသည်။ တချို့ကထောက်ပံ့ငွေငွေကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အချို့ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများဆီသို့သွားခဲ့သည်။
အောင်မြင်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ဖို့အကြီးမားဆုံးနည်းလမ်းကမင်းနဲ့အဆင်ပြေမယ့်လမ်းကိုလျှောက်လှမ်းဖို့ဖြစ်တယ်။ ပြင်ပလူ (အထူးသဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ) သင်ရိုက်သည့်လမ်းကိုလွှမ်းမိုးရန်ခွင့်မပြုပါနှင့်။ ၎င်းသည်သင်ယူရာတွင်အောင်မြင်ရန်လိုသောလမ်းညွှန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းညွှန်အဘယ်သူအားမျှသဘောတူပေမယ့် ဘယ်လို အဲဒါကိုလုပ်ဖို့ငါတို့အားလုံးသဘောတူတယ် သင့် လုပ်ပါ၊ ဒါ ... ငါတို့ပဲ!
James Carville နှင့်အောင်မြင်သောစျေးကွက်၏သော့ချက် ၃ ခု
မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် Martech Zone
စောင့်ကြည့် ဗီဒီယိုတစ်ကားကို အကွောငျး Douglas Karr, သူ့အလုပ်, သူ့ကုမ္ပဏီများနှင့်သူ၏ပူဇော်သက္ကာ။
ဆက်သွယ်ရန် Douglas Karr
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Category ေရြးပါ ကြော်ငြာနည်းပညာ Analytics & စမ်းသပ်ခြင်း အကြောင်းအရာစျေးကွက် ဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဒေတာပလက်ဖောင်း အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးနှင့်လက်လီရောင်းချမှု အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက် ထွန်းသစ်စနည်းပညာ ဖြစ်ရပ်စျေးကွက် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အရောင်းပြခန်းများ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာအုပ်များ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဖြစ်ရပ်များ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Infographics စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာများ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသင်တန်း မိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက်စျေးကွက် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး အရောင်းစွမ်းအား Search ကိုစျေးကွက် လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်
Hunter အလျင်အမြန်: အကျပ်အတည်းအတွက်အခွင့်အလမ်းများနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်စီးပွားရေးအောင်မြင်ရန်မည်သို့မည်ပုံ
ဤသည်၌ Martech Zone တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း, ငါတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များပညာပေးနှင့် Mises Institute အတွက်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုအတွက်ကူညီသူအလုပ်အကိုင်နှင့်စီးပွားရေးပညာရှင်အားဖြင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Hunter Hastings ကစကားပြော။ ကူးစက်ရောဂါကိုကျော်လွှားရာ၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ရှိမည့်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အခွင့်အလမ်းများနှင့်စီးပွားရေးနှင့်စားသုံးသူအပြုအမူတို့၏အပြောင်းအလဲများကိုကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးထားသည်။ အတွင်း…
Erin Jordan Spanski - B2B စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတစ်ခုကိုရွေးချယ်တဲ့အခါသော့သုံးခု
ဤသည်၌ Martech Zone အင်တာဗျူးကျနော်တို့ Walker Sands မှာဒုဥက္ကPresident္ဌနှင့်ပါတနာအားဟောပြောပါ။ Erin သည် B2B နည်းပညာကုမ္ပဏီများကြီးထွားလာအောင်ကူညီပေးရန်စိတ်အားထက်သန်သောအများပြည်သူနှင့်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်စျေးကွက်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။ B2B စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီနှင့်ရွေးချယ်ရာတွင်အောင်မြင်ရန်သော့ချက်သုံးခုကိုကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးထားသည်။ မဟာဗျူဟာမှသည်ကွပ်မျက်ခြင်းအထိ Walker Sands …
Jack Klemeyer - မသေချာမရေရာသောအနာဂတ်နှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ဦး ဆောင်မှု
ဤအဖြစ်အပျက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် (၂၅) နှစ်အတွေ့အကြုံရှိသောဝါရင့်စီးပွားရေးနည်းပြတစ် ဦး ဖြစ်သူ Jack Klemeyer နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း။ ဂျက်သည်လက်ရှိမသေချာမရေရာစီးပွားရေးအနာဂတ်၏အနာဂတ်နှင့်ခေါင်းဆောင်များမည်သို့တုံ့ပြန်ရမည်၊ ဤအဖြစ်အပျက်တွင်ဤဒုက္ခများနေစဉ်အတွင်းခေါင်းဆောင်များ၏နှလုံးသားနှင့်နီးစပ်သောအဓိကပြissuesနာအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးကြသည်။
Janet Mesh: ခေတ်မီသွက်လက်သောစျေးကွက်နှင့်လျင်မြန်သောမဏ္otိုင်ဖြစ်သည်
ဤသည်၌ Martech Zone တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Aimtal ၏စီအီးအိုနှင့်ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Janet Mesh နှင့်စကားပြောသည်။ Janet သည်အဖွဲ့တွင်းနှင့်ပြင်ပမှဖောက်သည်များနှင့်အတူခေတ်မီသွက်လက်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုလေ့ကျင့်သူဖြစ်သည်။ နေ့စဉ် (virtual) stand-ups၊ ပူးပေါင်းဆော့ဝဲလ်နှင့်အပတ်စဉ် Sprint များဖြင့် Janet နှင့်သူမ၏အဖွဲ့သည် Quick Pivot ကို အခြေခံ၍ မဟာဗျူဟာများကိုအခြေခံသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြီးပြည့်စုံစေသည်။
Password နှင့်ခိုင်လုံသောဖော်ပြမှုများဖြင့် Password Strength ကိုစစ်ဆေးပါ
Valentine's Day လက်လီအရောင်းနှင့် ၂၀၂၁ အတွက် eCommerce ဝယ်သူခန့်မှန်းချက်
မျိုးဆက်သစ်စျေးကွက် - မျိုးဆက်တစ်ခုချင်းစီသည်နည်းပညာနှင့်မည်ကဲ့သို့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်နည်း
Google Docs ကို အသုံးပြု၍ သင်၏ Ebook ကိုဘယ်လိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲနည်း၊
အကယ်၍ သင်ဟာ ebook တစ်ခုရေးသားခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းလမ်းကိုလျှောက်သွားလျှင် EPUB ဖိုင်အမျိုးအစားများ၊ ပြောင်းလဲခြင်းများနှင့်ရှုပ်ထွေးနေတယ်ဆိုတာသင်သိတယ်။
The Dark Web, Deep Web, နှင့် Surface / Clear Web ဆိုတာဘာလဲ။
အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးနှင့် Dark Web အကြောင်းကိုမကြာခဏမဆွေးနွေးပါ။ ကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏အတွင်းပိုင်းလုံခြုံရေးအတွက်ကောင်းမွန်သောအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ကြစဉ်…
© Copyright 2020 DK New Media, မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး